अर्थशास्त्रीले ‘नमूना विकास’ देखेको रत्ननगर अस्पताल, यसरी बन्दैछ उदाहरणीय – Health Post Nepal
२०७७ जेठ २४ गते १४:२१
चर्चित युवा अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले चितवनको ‘रत्ननगर अस्पताल’ विकास कसरी हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको टिप्पणी गरे। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अस्पतालको फोटोसहित पौडेलले एउटा नमुना अस्पताल कसरी सम्भव भयो भन्ने दृष्टान्त पस्केका छन्।
‘विकास विरोधका कुरा धेरै सुन्नुभयो अब विकास कसरी हुन्छ भन्ने सानो उदाहरण हेर्नुस्’ भनेर लेखेका छन् रत्ननगरकै स्थानीय रहेका पौडेलले।
उनको पोस्ट सेयर गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले लेखे– ‘यसरी गरिन्छ विकास, सकारात्मक सोच पहल र सहकार्यबाट। फोस्रा नारा र अफवाहबाट होइन, रत्ननगर टाँडीको सानो उदाहरण।’
**यसरी गरिन्छ विकास**सकारात्मक सोच, पहल र सहकार्यबाट । फोस्रा नारा र अफवाहबाट होइन ।रत्ननगर, टांडीको सानो उदाहरण ।Devendra Kumar Shrestha Biswo Poudel
Posted by Swarnim Waglé on Friday, June 5, 2020
अर्थशास्त्रीहरूको प्रतिक्रियापछि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. विश्वबन्धु बगालेलगायत सरोकारवाला र स्थानीयसँग अस्पतालको सेवा र अवस्थाबारे बुझ्यौं।
केही समयअघि केन्द्रीय अस्पतालको सूचीमा समेटिएको भरतपुर अस्पतालका समेत मेसु बनेका डा. बगालेले अस्पताललाई राम्रो बनाउने सन्दर्भमा स्थानीयको सहयोग, समन्वय र सहकार्य उदाहरणीय पाएको बताए।
१५ बेड क्षमताको सरकारले तय गरेको नयाँ संरचनाका आधारमा प्राइमरी अस्पतालको रूपमा सञ्चालित अस्पताललाई प्रदेश सरकारले समेत प्राथमिकतामा राखेर सेकेन्डरी बी लेवलको अस्पताल बनाउने तयारी सुरु गरेको छ। पुरानो संरचनाको आधार मान्दा जिल्ला अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ।
भौतिक, पूर्वाधार, व्यवस्थापनका हिसाबले अब्बल देखिएको अस्पताल बनाउन स्थानीयसँगै स्विट्जरल्यान्डको शान्तिमेड नेपाल नामक संस्थाले उल्लेखनीय सहयोग गरेको छ। विभिन्न सहयोग, सहकार्य र राम्रो व्यवस्थापनबाट अस्पताल उदाहरणीय स्वास्थ्य संस्था बनेको छ।
सरकारीतर्फ एक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसहित दुई दरबन्दी रहेको अस्पतालमा दरबन्दीअनुसार मेसुबाहेकका चिकित्सक नभए पनि छात्रवृत्ति र करारसेवामा गरी ८ चिकित्सक कार्यरत छन्। त्यसमा २ चिकित्सक स्थानीय स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएको छ।
यो तहका अन्य अस्पतालका तुलनामा नियमित डाइलायसिस, डेन्टल, चर्म, स्त्री, प्रसूति र बालरोग सेवा उल्लेखनीय रहेको डा. बगालेले जानकारी दिए।
अस्पताल विकासमा सहकार्य गरिरहेको स्विस संस्थाका प्रमुख एवं चर्मरोग विशेष डा. रुठले चर्मरोग सेवा आफैं दिइरहेका छन् भने संस्थाले प्रसूति सेवाका लागि चिकित्सक प्रबन्ध गरिरहेको छ। बालरोग विशेषज्ञसमेत रहेका मेसु बगालेले बाल स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन्।
डा. बगालेका अनुसार नेसनल किड्नी सेन्टर र रत्ननगर नगरपालिकाको सहकार्यमा सुरु गरिएको डाइलायसिस सेवा तराई क्षेत्रकै बिरामी निर्भर बनेसँगै मेसिन थपेर रात्रिकालीन सिफ्ट सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ।
६ वटा डाइलायसिस मेसिनबाट ४९ जनालाई हप्तामा २ देखि ३ पटक डाइलायसिस सेवा पुर्याउँदै आएको छ। लकडाउन र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भन्दै धेरै अस्पतालमा बिरामीको चाप घटेको अवस्थामा पनि अस्पतालबाट २ सय ५० भन्दा बढी बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्। यो सेवाबाट नगरवासीमात्रै होइन, पूर्वी तराई र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका बिरामीसमेत लाभान्वित भएका छन्।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ अस्पतालको नवनिर्मित भवन स्विस संस्थाको सहयोगमा बनेको हो। त्यसबाहेक पुरानो भवनमा तला थप्ने र गुरुयोजनाअनुसार प्रदेश सरकारबाट थप भवन पूर्वाधार विकासको काम पनि जारी रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
अस्पतालमा अधिकांश प्रयोगशालाजन्य परीक्षण उपलब्ध छ। केही समयभित्रै हाल नभएको थाइरोइड परीक्षण सेवासमेत सुरु गरिने डा. बगालेले जनाए। दिउँसोको समयका लागि सुविधासम्पन्न अस्पताल रहेको भरतपुर टाढा नभए पनि आकस्मिक अवस्था र आधारभूत सेवा गुणस्तरीय र भरोसायोग्य बनोस् भन्ने सोचअनुसार नै व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको डा. बगाले बताउँछन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अस्पतालको सञ्चालक समिति मेयरकै अध्यक्षता बने पनि पूर्व अध्यक्षलगायतका सरोकारवालाको पनि उत्तिकै चासो र सहयोगले अस्पताल नमूना बन्न मद्दत पुर्याएको हो। ‘यो अवस्थामा ५ सय भन्दा बढी ओपिडी हुनुपर्ने हो, तर लकडाउनका कारण पनि आधाजति मात्रै सेवाग्राही आइरहेका छन्,’ डा. बगालेले थपे, ‘अहिलेजस्तै सहयोग र पहल जारी रहँदा २–३ वर्षभित्रै प्रमुख विशेषज्ञ सेवासमेत प्रदान गर्न सक्ने राम्रो अस्पताल बन्छ।’
गगन थापा, सुरेन्द्र पाण्डेदेखि स्वर्णिम वाग्लेको साथ
अर्थशास्त्री पौडेलका अनुसार अहिले अस्पताल परिसरमा फूल लगाउने काम सुरु भएको छ। अस्पतालमा विस्तार स्विट्जरल्यान्डको सोलारबाट चल्ने डाइलायसिस सेन्टर, अमेरिकामा जस्तो औंला दबाएर पानी आउने धारो र शौचालय पनि उस्तै सफा भएको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। उनले अस्पतालको शौचालय ओभानो र पूर्ण व्यवस्थित रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।
दैनिक ४ देखि ५ सयसम्म बिरामीलाई सेवा दिइरहेको सो अस्पताल नमूना बन्नका लागि उनले योगदान गरेका व्यक्तिको नामसमेत उल्लेख गरेका छन्। अस्पतालमा नियमित डाइलायसिस भएपछि तराईका जिल्लाबाट आएर सेवा लिई फर्किने गरेका छन्।
उनले पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेदेखि अर्थशास्त्री एवं योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्।
पौडेलले जनाएअनुसार स्विस संस्था शान्तिमेड नेपालले अस्पताललाई यो अवस्थामा पुर्याउन मेयर नारायण वनको भूमिकाको उल्लेखनीय छ। गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री रहँदा अध्यक्ष देवेन्द्र श्रेष्ठसहित सबै दलका प्रतिनिधि रहेको सञ्चालक समिति बनेको थियो। श्रेष्ठले स्विस संस्थासँग मिलेर अगाडि बढाएका थिए।
श्रेष्ठले अस्पताललाई नमूना बनाउन अन्तराष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गरेको, चिकित्सक ल्याउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। अस्पतालका लागि सोलार पावर जडानमा एइपिसीको समन्वयमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले र रामप्रसाद धितालको भूमिका रहेको पौडलेले जनाएका छन्। पूर्वमन्त्री पाण्डेले भने अस्पतालको सुन्दरता अभिवृद्धि गर्न भनेर २० लाख सहयोग जुटाइदिएका थिए।
विकसित देशमा देखिनेजस्तो फाउन्टेन धारा रत्ननगरस्थित गैरसरकारी संस्था सिआरसीको पहलमा हङकङको ड्रप अफ लाइफले सहयोग गरेको थियो। उनका अनुसार डाइलायसिस केन्द्र बनाउन रोटरीको सहयोग थियो।
सुन्दर अस्पतालमा उत्कृष्ट स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिले प्राण भरिएको छ। अस्पतालका मेसु एसएससीमा बोर्डफस्ट हुनुका साथै महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसबाट उत्पादित चिकित्सक रहेको उनले जनाएका छन्।
अस्पतालको ठूलो लक्ष्य नभए पनि स्थानीयलाई अप्ठ्यारो पर्दा अत्यावश्यकीय सेवा, प्रसूति सेवा मिलोस् भन्ने प्रमुख उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।
उत्कृष्ट समन्वयमा संस्था बन्न सहज नभएको भन्दै उनले सहयोगी संस्था शान्तिमेड नजिकैको अर्को ठाउँमा काम गर्न सहज नभएपछि फर्किन लागेकोसमेत सुनाए।
स्विट्जरल्यान्ड फर्किन लागेको अवस्थामा एक वृद्ध स्विस चिकित्सकलाई श्रेष्ठसहित अस्पताल सञ्चालक समितिका जानी अहमदले रत्ननगरमा आमन्त्रण गरेका थिए।
नयाँ परिस्थितिमा धेरै स्थानमा विकास समिति भंग गर्दा मेयरले राजनीति नगरी सञ्चालक समितिलाई निरन्तरता दिएको उनले स्मरण गराए।
‘भत्काउन सजिलो हुन्छ, बनाउन गाह्रो हुन्छ तर संसार भत्केको भन्दा बनेको धेरै देखिन्छ,’ उनले थपेका छन्, ‘सभ्यता अगाडि बढेको छ किनकि औसत मान्छेका मनभित्र विकास गरौं, अगाडि बढौं, मेरा छोराछोरीको भविष्य राम्रो बनाउँ भन्ने नै हुटहुटी हुन्छ।’